'ओली कमरेड, बहसबाट नभाग्नुस्, तपाईँको प्रस्ताव नि ल्याउनुस्, छलफल गरौँ'
‘ओली कमरेड, बहसबाट नभाग्नुस्, तपाईँको प्रस्ताव नि ल्याउनुस्, छलफल गरौँ’
काठमाडौं। दलका शीर्ष नेताहरूबीच बढेको विवादका माझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउन थालिएको छ। नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीलाई वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्न पार्टी नेतृत्व तयार हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्।
पार्टीमा विधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कारको विकासका लागि नेतृत्वले बहसको वातावरण बनाउन पर्नेमा नेकपा नेता लेखनाथ न्यौपानेको जोड छ। उनले राजनीतिक बहसबाट विधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कारसहितको पार्टी निर्माण गर्न सकिने तर्क गरे। पार्टीलाई सही दिशा दिन पार्टीका नेताहरूले लिखित प्रस्ताव ल्याउनुलाई अन्यथा लिन नहुने नेता न्यौपानेको भनाई छ। तर शीर्ष नेतृत्व पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट भाग्नु चाहिँ दुखद भएको उनले बताए।
‘विचार, दिशा (उद्देश्य), विधि र संस्कृतिसहितको पार्टी बनाउने हो भने बहसबाट, लिखित प्रस्तावबाट र कमिटीका बैठकहरूबाट किन डराउनु पर्‍यो ?, सामाजिक सञ्जालमा नेता न्यौपाने लेख्छन्, ‘१ नम्बर अध्यक्ष कमरेड र अरूहरूले पनि लिखित प्रस्ताव राख्ने हिम्मत गरौँ वा वातावरण बनाऔँ। विचार र नीतिलाई केन्द्र मानेर खुलेर बहस गरौँ। आलोचना मात्र होइन, आत्मालोचना समेत गरौँ।’
पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो बनाउन शीर्ष नेतृत्वमा ठुलो रूपान्तरण आवश्यकता औँल्याए। शीर्ष नेतृत्व विचार विहीन अङ्क गणित र संसदीय खेलमा मात्र केन्द्रित हुने भए कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले भनेका छन्, ‘सबै मुख्यतः ठुला नेताहरू रूपान्तरित बनेर पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै बनाऔँ। होइन, बिचारविहीन अंक गणित/संसदीय खेलको मात्र पार्टी बनाउने उद्देश्य हो भने कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो ? कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा किन प्रयोग गर्नुपर्‍यो ? कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जनतासँग मत किन माग्नुपर्‍यो ?’
पार्टी नेतृत्वको गतिविधि समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ नभई पद, पावरमा केन्द्रित भएको नेता न्यौपानेको आरोप छ। ‘पद, पावर र शासक बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरिइएको हो भने एकै ठाउँमा पो किन बसिराख्नु पर्‍यो र ? पार्टी एकता संकटमा भनेर गोहीको आँसु चुहाउने दुख पनि नगरौँ अब ?, उनले प्रश्न गरेका छन्।
ट्रकको ठक्करबाट प्रहरी हवल्दार विष्टको मृत्यु
कम्युनिस्ट पार्टी मजदुर-किसानको पार्टी हो, पुँजीपति र दलालको पार्टी होइन : मदन भण्डारी (दस्तावेज)